Cuntada habka ay u shaqayso | Bloomington Public Schools - District #271
Home / Cuntada habka ay u shaqayso
Iskuuladka Bloomington barnamijkoda cuntada waxuu bixiya cuntoyin nacafleh, iskuul walbana wuxuu bixiya qurac iyo qado. Maalin walba kushiinadena waxay diyariyan in ka badan 2,000 qurac ah iyo 7,000 qado oo ay u diyariyan ardayda iyo shaqalaha iskuulad keena oo dhan.
Boga laga eegto cuntada/Menus waxan bixina bilwalba oo aan siina ardayda u dhaxaysa dugsiga hoose ila iyo dugsiga dhexe/K-8. Bogas wuxuu kaloo ku dhagan yahay iskuul walba, waxad kaloo ka eegi karta tv ga, Xarunta ku shaqo leh cuntada xafiiskoda ama websiteka.
Bilwalba waxa lasoo dabaca boga cuntada laga eegto/menu oo lagu soo qoray cuntada iyo nacagyadeeda. Sida ku cadeesanba USDA cuntada waa in xadad loo yeela xeerteda.
Quracda ilmaha muhiim ayey u tahay oo qeeb wayn ayey ka qadata waxbarshadoda. Quracda ay ka cunan iskuulka ama guriga, waxay muujisa in ardayga uu si dabci wanagsan u dhaqmo. Iskuulka wuxuu bixiya qurac 20 ila iyo 30 daqiiqo ka hor intusan iskuulka bilawanin. Kuwa hela cuntada bilashka ah ama la qimo jabiyey waxay sidoo kale xaq u leeyihin qurac.